Somaliland oo soo saartay Amaro horleh oo ku aadan… + Akhriso | Mareeg Online
Home Wararka Maanta Somaliland oo soo saartay Amaro horleh oo ku aadan… + Akhriso
Somaliland oo soo saartay Amaro horleh oo ku aadan… + Akhriso
Maamulka Somaliland ayaa Maanta markale soo saaray Go’aano hor leh oo ay ku doonayaan inay uga hortegaan faafida Cudurka halista ah ee Coronavirus oo ku faafaya dalal ku yaalla Afrika.
Wasiirka Caafimaadka Somaliland Cumar Cali Cabdullaahi oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa waxaa uu sheegay in Maanta laga bilaabo dadka kasoo degaya Garoonka diyaaradaha Cigaal Internationa laheyn doono muddo 14-maalmood ah.
Waxaa uu sheegay Wasiir Cumar Cali in laga bilaabo Maanta oo Arbaco ah la xiray dhamaan xuduudaha Somaliland, isla markaana aysan jirin wax isku gudbaya marka laga reebo Raashinka, Shidaalka iyo Dawooyinka.
“Laga bilaabo maanta rakaabka kasoo dege garoonka diyaaradaha Somaliland waxaana lahayn doona 14 cisho, Raashinka , shidaalka iyo dawooyinka mooye xuduudku waa xidhan yahay maanta laga bilaabo wax isku gudbayaana majiraan” ayuu yiri Wasiirka Caafimaadka.
Si kastaba Maamulka Somaliland ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaadlo dhowr ah oo ay uga hortegayaan faafida Cudurka halista ee COVID-19 oo haatan saf-mar ku haaya dalal badan oo ku yaalla dunida.
Previous articleBaarlamaanka KGS oo ku dhawaaqay Guddi Doorasho + Magacyada
Next articleDEG_DEG: Qarax Ismiidamin ah ayaa daqiiqado ka hor ka dhacay agagarka degmada Howlwadag ee magaaladda Muqdisho.
Wariye 44 sano xaaskiisa oo kaliya ay dhageysan jirtay
Deke Duncan oo ah 73 jir farsame yaqaan ah, una dhashay dalka Ingiriiska ayaa muddo hadda laga jooo 44 sanno waxaa uu sameystay idaacad...